Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » uhambo ngomoya » Ukucima iTowers eScotland
isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Ulawulo lweTrafikhi yomoya eScotland
Uluntu lwasemaphandleni kwii-Highlands kunye ne-Islands alunandlela yesibini okanye isicwangciso B seenkonzo zonyango kunye nezoxakeka eziwela phantsi kwezinye ze-Scotland Air Traffic Control tower kwi-Highlands kunye ne-Islands Airports Limited (HIAL) ezibekelwe ukuvalwa .
Umbutho wabasebenzi bezothutho waseYurophu (i-ETF) ufuna ukuba iinkonzo ze-ATC ziqinisekiswe kwingingqi ngaphandle kokuyeka.
I-ETF igxininisa ukuba-ngokuchaseneyo nento enokubonakala ngathi ikwimeko efanayo eLondon-uninzi lwezikhululo zeenqwelomoya ze-HIAL zifuna ukufikelela kwindiza ngenjongo zonyango mihla le.
Ukongeza, ezi zikhululo zeenqwelo moya zisetyenziselwa ezinye iintlobo zeenkonzo zongxamiseko.
I-ETF igxeka kabukhali ezona njongo zakutsha nje zenkampani i-HIAL-eqhuba izikhululo zeenqwelomoya ezili-11 kwii-Scottish Highlands, i-Northern Isles, kunye ne-Western Isles- zokunciphisa inqanaba langoku Ukulawulwa kwezithuthi zomoya iinkonzo kwizikhululo zeenqwelomoya ezi-6 kwii-Highlands nakwii-Islands kunye nokuzigcina zikwindawo ekude.
Kwileta ebhekiswe kuMphathiswa wezoThutho eScotlandUmnumzana Graeme Dey MSP, ETF, uxele ukuba isigqibo esinje siza kuphazamisa kakhulu uluntu lwasemaphandleni kwingingqi ye-Northwestern eScotland, kungekuphela nje ngenxa yokuphulukana nemisebenzi yabantu abanezakhono, kodwa nangokulahlekelwa ziinkonzo ezibalulekileyo- ezinje iinqwelomoya zonyango - ngenxa yokuba sesichengeni kwetekhnoloji yenqaba ekude.
I-ETF ithathela ingqalelo ukuba uRhulumente waseScotland kufuneka anikezele ekuphumezeni eso sigqibo kwaye ucela uMphathiswa Wezothutho waseScotland ukuba ajonge ngaphaya kweendleko ezifanelekileyo kunye namanani enzuzo ye-HIAL kwaye ajolise ikakhulu kwiziphumo ezibi zexesha elide zeso sigqibo kubemi baso. , abasebenzi, kunye noluntu ngokubanzi kwii-Highlands nase-Islands.
Olu xwebhu lubonisa ukuba abasemagunyeni abavela Edinburgh Ungalibali kwanomzuzwana ukuba ukhuseleko kunye nophuhliso lwezoqoqosho kwezi ndawo zoluntu kufuneka zize kuqala, ngakumbi kuba zixhomekeke kwinqwelomoya ukuba ziqinisekisiwe ngeenkonzo ezisisiseko, ikrwelelwe kwileta ye-ETF ethunyelwe kuMphathiswa Wezothutho eScotland.
Unobhala Jikelele we-ETF, u-Livia Spera, otyikitye ileta eyayisiya kwabasemagunyeni base-Scottish, wagxininisa ukuba ngaphandle kovavanyo olucacileyo lweziphumo zentlalo nezoqoqosho kwisigqibo esinjalo, ukususa iinkonzo ezikhoyo zomntu kuya kuchaphazela kakhulu impilo Olu luntu luseMantla ntshona eScotland, njengoko izikhululo zeenqwelo moya zidlala indima ebalulekileyo kubukho bazo.